Soosaaraha Woosen ee ugu fiican soosaaraha iyo Warshadda | Fepton
Woosen light light qalliinka
Nooca Light Nalka Hawlgalka
Habka ： Woosen 800/900
Nalalka hawlgalka ee 'LED Inspital LED' ayaa loogu talagalay inay buuxiyaan dhammaan shuruudaha iftiinka qalliinka ee tiyaatarada hawlgalka. Tikniyoolajiyadda cusub ee loo yaqaan 'LED LED' waxay ka caawisaa dhakhaatiirta qalliinka inay shaqeeyaan oo si cad u arkaan aagga qalliinka. Nalalka loo yaqaan 'LED Inspital LED' ayaa lagu waafajin karaa cabir kasta oo ka mid ah tiyaatarka hawlgalka oo ay ku jiraan noocyo isku dhafan oo waaweyn oo leh moodallo & isku-dhafyo kala duwan.
Dhammaan codsiyada qalliinka, ficil kasta waa inuu sax ahaadaa. Shuruudda aasaasiga ah ee tan waa soo bandhigid qumman aagga dhaawaca. Sidaa darteed, waxaa aad muhiim u ah in la doorto laambadaha qalliinka saxda ah. Waad ku mahadsan tahay dhalaalka cad, oo leh faa'iidooyinka is-beddelka ugu fiican iyo hawlgalka fudud, Nalalka qalliinka Woosen LED waxay noqon doonaan kuwo caqabad ku ah xaalad kasta. Maalmahan, baahida nalalka qalliinka ayaa ka sarreeya sidii hore. Jiilkii ugu dambeeyay ee nalalka qalliinka LED-ka, waxay kusii socotaa naqshadeynta nalalka noocan oo kale ah habeynta hawada ee Woosn. Bixinta nalka ugu sarreeya aagga dhaawaca waa muuqaalka weyn ee Woosn oo aan lahayn hooska, iyo hawlgal dhakhso ah oo sahlan oo gacanta gacanta oo leh qaab iftiin gudaha ah. Iyada oo gacan laga helayo tiknoolajiyada qaybsan, astaamaha ugu dambeeyay ee joogtada ah ee Woosen LED waa fikradda qaabaysan. Nidaamkani wuxuu u oggolaanayaa macaamiisha inay si fudud oo madax-bannaan u qaataan dhammaan hagaajinta mustaqbalka ee iftiinka iftiinka LED-ka, taas oo markaa ku dhafanaysa nalalkooda qalliinka shaqsiyeed. Iyada oo tiknoolajiyadaan la beddeli karo ee loo yaqaan 'LED', Woosen waxay hubineysaa in macaamiisheeda ay awoodi doonaan inay ku raaxeystaan ​​nalalka qalliinka leh tamarta hoose ee mustaqbalka. Woosen wuxuu hagaajin doonaa nabadgelyada bukaanka iyada oo loo marayo heerkulka midabka la isku hagaajin karo inta u dhexeysa 3500 K iyo 5100 K. Heerkulka midabka waa la hagaajin karaa si loo hagaajiyo muuqaalka kala duwanaanta unugyada aadka u jilicsan ama dhifka ah. Sidan oo kale, heerkulka midabka ugu habboon ayaa had iyo jeer lagu hagaajin karaa miiska qalliinka, taas oo yareyn karta daalka iyo fududaanta in xoogga la saaro hawlgalka.
Naqshadeynta Nalalka Gaarka ah
Design Naqshadeynta madaxa oo leh iska caabin aerodynamic oo hooseysa ayaa ilaalinaysa qulqulka hawada laminar ee qolka qalliinka inta lagu jiro hawlgalka
Function Feejignaanta gacanta ee gacanta ayaa lagu hagaajin karaa labadaba xakamaynta iyo shaashadda xakamaynta Qalabka Teknolojiyada & Xaaladda Endoscopy
Technology Tikniyoolajiyadda Sensor-ka oo awood u siineysa laydhka otomaatiga ah ee laydhka la xidhiidha
Qaybaha iyo ka hortagga samaynta hooska aagga laydhka markii la wajaho caqabad
Functionality Hawlaha joogtada ah ee loogu talagalay endoscopic iyo qalliinka qalliinka ugu yar ee qalliinka iyada oo la adeegsanayo hal nal oo keliya (shaqeynta qalliinka)
Temperature Heerkulka midabka la isku hagaajin karo oo u dhexeeya -3000K -5000K
Panel Gudiga xakamaynta shaashadda midabka LCD ee xukuma dhammaan howlaha
Tikniyoolajiyadda casriga ee jiilka cusub
Mod Qeybaha sare ee LED-ka ayaa buuxiya dhammaan shuruudaha qalliinka
Module Qayb kasta oo LED ah waa la beddeli karaa shaqsi ahaan haddii ay dhacdo in cillad jirto
50.000 saacadood oo cimri dheer ah
Temperature Heerkulka midabka la hagaajin karo inta u dhexeysa 3000-5000 °
Astaamaha Iftiinka Hawlgalka
Halbeegyada iftiinka qalliinka Woosn
900 madaxa fudud
800 madaxa fudud
Ballaca madaxa nalka
Iftiinka ugu badan:
Midab - Tilmaanta Bixinta CRI （Ra index Tilmaamaha hoos u dhaca Cas （R9）
Kala duwanaanta iftiinka iftiinka
10 Xakamaynta Fasalka
heerkulka iftiinka oo kordha
5 Xakamaynta Fasalka
Isku mid ahaanshaha （D10 / D50）
Qoto dheer shidan
Qoto Dheer Qiime aan Hoos lahayn
Guddi keli ah oo aan hoos lahayn
Guddi keli ah oo qoto dheer oo heer sare ah
Laba Guddi Rate Shadowless
Laba Guddi Labaad Qoto Dheer Qiime aan Midab Lahayn
Radioactivity Ee / Ec （MW / m²lux
Shanghai Fepdon Qalabka Qalabaynta Co., Ltd. waxaa la aasaasay 2009, oo ku yaal magaalada Shanghai, Shiinaha. Waxaan u heellan nahay cilmi baarista iyo horumarinta qalabka caafimaadka, soo saaridda iyo ganacsiga. Waxaan leenahay warshad noo gaar ah oo ah 7000 mitir murabac oo leh tas-hiilaad wax soo saar oo dhameystiran iyo habka tijaabada.Waxa ka badan 200 oo shaqaale ah iyo 10 injineero sare oo injineero ah, injineerada korantada, iyo farsamayaqaano waayeel ah oo leh aragtiyo gaar ah iyo awooda lagu ilaalinayo cusbooneysiinta iyo horumarinta alaabooyin cusub oo ku wajahan baahida macaamiisha iyo baahida suuqa. Waxaa intaa dheer, waxaan leenahay aqoon isweydaarsi alxamid ah, aqoon isweydaarsi farsamo, aqoon isweydaarsi, aqoon isweydaarsi bakhaarro, iwm. Waxaan diiradda saareynaa qaabeynta iyo soo saarista isbitaalada iyo masraxyada qalliinka ku isticmaala qalabka caafimaadka sida nalka qalliinka iyo laambadda baaritaanka caafimaadka, qalabka biriijka ee ICU, ICU Pendant ee OR / OT codsi daryeel deg-deg ah, sariirta hawlgalka iyo alaabada nidaamka gaaska caafimaadka & qaybaha ku habboon injineernimada iwm. Marka laga reebo badeecadeenna, waxaan bixinnaa adeegyo OEM ah waxaanna aqbalnaa amar si loo habeeyay sidoo kale. In kabadan 10 sano dadaal iyo horumar, waxsoosaarkeena oo idil horey ayaa looga iibiyey gobol kasta iyo magaalooyin katirsan suuqa Shiinaha. Waxaan ka iibinay alaabada Koonfur-bari Aasiya, Bariga Dhexe, Yurub, Koonfurta Ameerika, Afrika. Waxaan ku soo bandhigi doonnaa alaab aad u wanaagsan oo leh nashqado kala duwan iyo adeegyo xirfad leh. Hadafkeenu waa inaan siino alaab casri ah oo fududeysa doorka daryeel bixiyaha siinta natiijada ugufiican bukaanka. Waxaan sugeynaa inaan helno su'aalahaaga dhowaan.
damaanad: 5 sano. la xiriir qofka iibka ah isla markiiba haddii su'aal kasta. Soo-saare china nal jaban oo horseed u ah nalalka qolka qalliinka.
Hore: Taxanaha Geeta LED Shadowless Light
Xiga: Miiska hawlgalka